तिथि मेरो पत्रु » 12 जब अनलाइन डेटिङ सुझाव उत्साहित रहन को लागि
अनलाइन डेटिङ कहिले काँही धेरै demoralizing महसुस गर्न सक्छन्. यसले हामीलाई बाहिर जलाइदिए महसुस गर्न सक्छ, निराश र पनि तीतो. त्यसैले यस जोगिन र सट्टा यो हुन सक्छ समीरिक र मजा अनुभव मा अनलाइन डेटिङ गर्छन् कसरी? यहाँ तपाईं को लागि केहि सुझाव हो.
– तपाईं बस तपाईं लागि के देख रहे हुनेछैन भनी अनलाइन मान्छे को एक धेरै पूरा गर्न जाँदैछन् स्वीकार. त्यो ठीक छ! यो सम्झौता को भाग हो. आंकडे सयौं मा पुग्न भने बन्द हुन नगर्नुहोस् (म यस तर्साउन यसो होइन र तपाईँले गणना भने यो उच्च यस पुग्न सक्छ हरेक ई-मेल). अनलाइन डेटिङ सन्देशहरू को एक धेरै र फिर्ता र जहाँतहीँ छन्. यो स्वीकार्नुहोस् र यो तपाईं चिन्ता छैन.
– ई-मेल र सम्पर्क व्यवहार लागि प्रणाली छ. यो तपाईं बाहिर जला रोक्न मदत र उत्प्रेरणा रहन सक्छ. म म सम्पर्क थियो व्यक्तिगत निर्भर म बस अलिकति छाँटकाँट जो मानिसहरू सम्पर्क लागि प्रयोग गर्ने कुरा एक मानक ई-मेल गर्न प्रयोग. म यस व्यक्तित्वहीन मानिन्छ हुन सक्छ,, वास्तवमा यो प्रक्रिया व्यवस्थापन र उच्च ऊर्जा रहन बस एक कुशल तरिका थियो. तपाईं सिद्ध ई-मेल टाइप घण्टा बिताए पछि मात्र कुनै प्रतिक्रिया छ (फेरि), म यस सुझाव तिमी किन बुझ्न. तपाईं पनि तपाईं मान्छे तपाईं रुचि छ या छैन निर्भर राखे जसमा विभिन्न फोल्डरहरू हुन सक्छ.
– छोटो प्रारम्भिक ई-मेल राख्नुहोस्. मैले तिमीहरूलाई चिन्न कष्ट छैन सुझाव होइन, तपाईं तिनीहरूलाई स्क्रीनिंग बेला तपाईं धेरै कम प्रारम्भिक ई-मेल राख्न मात्र. धेरै छोटो ई-मेल पछि तपाईं दुवैले अझै पनि चासो र सञ्चार हो भने त तपाईं उनलाई संग एक सानो गहिरो जान सक्नुहुन्छ. यो तपाईं ई-मेल र चासो धेरै प्राप्त भने बाहिर जला रोक्न र यो ह्यान्डल गर्न विशुद्ध छ.
– चाँडै वा टेलिफोन 'व्यक्ति मा' सार्नुहोस्. जाहिर मनमा सुरक्षा राखन, र म चाँडै एक वास्तविक जीवन मिति प्राप्त गर्न मेरो ग्राहकहरु प्रोत्साहन. तिनीहरूले अनलाइन कति मान्छे देखि वास्तविक जीवन मा धेरै फरक हुन सक्छ किनभने यो छ, तिनीहरूले तपाईं वास्तविक जीवनमा तिनीहरूलाई पूरा नभएसम्म तपाईं को लागि एक फिट हुन जाँदैछन् भने र तिमीलाई थाह छ कहिल्यै. यसको लागि अनलाइन अगाडी र Messaging घन्टा खर्च छैन, अन्यथा तपाईं को लागि उपयुक्त हुन सक्छ कि मान्छे मा धेरै समय बर्बाद हुनेछ.
– के तपाईं पठाउन ई-मेल जवाफ प्राप्त छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्. यस तपाईं के हुन्छ भने म यो फेरि भयानक महसुस गर्न सक्छन् र ठेगाना व्यक्तिगत ले छैन. हामी केही प्राप्त जहाँ कहिलेकाहीं हामी सबै एक सुक्खा समयावधिको माध्यम ले जाने. हामी पठाउन ई-मेल को कुनै पनि कुनै उत्तरहरु, कुनै सम्पर्क र यति मा. यस तपाईं के हुन्छ भने नआत्तिनुहोस्, यो तपाईं आफ्नो प्रोफाइल र चित्रहरु मा लेखिएको छ के मा अर्को उद्देश्य देखो ले लायक छ तर तपाईं पोस्ट गरेको छ. आफ्नो प्रोफाइल को स्वर निश्चित अनुकूल हुनुपर्छ, प्रकाश र हँसिलो. तपाईं आफ्नो प्रोफाइल जाँच गरेको छ त तपाईं अझै पनि कुनै किस्मत भएको छ भने, यसलाई हेरेर केही प्रतिक्रिया दिन एक विश्वसनीय मित्र सोध्न. तैपनि तिनीहरूलाई बनाउन तपाईंले बाहिर पठाइरहेका छन् सन्देशहरू केही माथि जाँच छ पक्का तिनीहरूले ठीक पढ्न.
– यस्तै दिशामा तपाईं एक महिला छन् र तपाईं केही सन्देशहरू प्राप्त गर्न पर्खिरहेका छन् र केही माध्यम ले आउछ भने, फेरि चिन्ता छैन. पढ्नुहोस् र माथि को कदम पालन. साथै यस म महिलाहरु आफ्नो पुरुषत्व ऊर्जा हुन सक्छ सुझाव हो कि एक क्षेत्र हो कि याद, बस यो प्रारम्भिक चरणको लागि. के म यो मतलब अगाडि जान र तपाईंलाई रुचि सम्पर्क र सन्देश मानिसहरूले पहिलो कदम बनाउन छ. अनलाइन डेटिङ साइटहरूमा धेरै 'शोर' हुन सक्छ र तपाईं आफ्नो उपस्थिति प्रकट छैन भने साधा मा गुमाए प्राप्त गर्न सक्छन्. ठाउँ मा आफ्नो सिस्टम मान्छे सम्पर्क र प्राप्त गर्न आफ्नो पुरुषत्व ऊर्जा प्रयोग, संचार सुरु भएको एकचोटि र त्यसपछि आफ्नो स्त्रीवाचक ऊर्जा मा सही फिर्ता ड्रप.
– उनि गायब भने यो व्यक्तिगत ले मत. हामी सबै यो के थियो छु. तपाईं अनलाइन कसैले पूरा, तपाईं तिनीहरूलाई संग कुराहरु छन्, यो सबै राम्रो रहेको गर्नुपर्छ, राम्रो तरिकाले निर्माण, सायद तपाईं पनि एक मिति लागि सोध्ने काम गरेर माथि छन्, र त्यसपछि अचानक 'poof' तिनीहरूले धुवाँ को एक बादल गायब, फेरि देख्न कहिल्यै. तपाईं भयानक केही भन्न गरे? तिनीहरू मर्छन् गरे? खैर शायद छैन. अधिक संभावना पनि अनलाइन अन्य मानिसहरूलाई कुरा थिए, र, अरू कसैको त्यहाँ पहिलो मिल्यो, वा तिनीहरूले फिर्ता देखाए प्रेम गोप्य अझै पनि थिए र तपाईं एक भाग्यशाली भाग्ने थियो कि शायद आफ्नो पूर्व. मुद्दा तपाईंले थाहा कहिल्यै छ. अनि यो हुन्छ सबै समय! तपाईं यस थाहा छ भने यो बाहिर खील लिन मदत गर्छ. तपाईं वास्तवमा वास्तविक जीवनमा उहाँलाई भेटेका छन् सम्म म सधैं मेरो महिलाहरु ग्राहकहरु पनि भावनात्मक समावेश प्राप्त गर्न सल्लाह, र उहाँले तपाईं देखाउने छ सम्म वास्तव मा त्यो तपाईं गम्भीर चासो छ. त्यतिन्जेल उहाँले धेरै बाहिर तपाईं को लागि केवल एक विकल्प छ. व्यक्तिगत 'गायब' ले मत.
– नुन एक चिम्टी यो सबै व्यवहार. अनलाइन डेटिङ के छ. तपाईं यो के हो लागि यो स्वीकार गर्न सक्छन् भने तपाईं यो संग एक धेरै सजिलो समय हुनेछ. तपाईं केही oddballs पूरा हुनेछ, के तपाईं सोच्न भयानक केहि मान्छे हो जो पूरा हुनेछ, तपाईं सायद तपाईं जस्तै केहि मान्छे भेट्न हुनेछ र शायद तपाईं सम्बन्ध छ र प्रेम मा गिर व्यक्तिलाई पूरा हुनेछ. तर यो छ अरू जो, यो एउटा अनुभव हुनेछ. तपाईं किनभने यो एक व्यक्तिको रूपमा बढ्नेछ र तपाईं विपरीत सेक्स सदस्य अन्तरक्रिया अभ्यास गर्न प्राप्त. त्यसैले मा दिन छैन, बस नुन एक चिम्टी संग यो लिन पक्का हुन, यसबारे आफ्नो साथीहरूसँग हाँस्न र बाटो यो संग केहि मजा.